एजेन्सी । बलिउडका सुपरस्टार अक्षय कुमार हिन्दी सिनेमाको 'खिलाडी'को नामबाट परिचित छन् । उनले वर्षमा एक भन्दा बढी हिट फिल्म दिदै आएका छन् । उनको बलिउडका सबै स्टार्सहरुसँग राम्रो सम्बन्ध रहेको छ । विस्तृतमा
दुर्गेश थापालाई पुत्र लाभ
चलचित्र ‘आरम्भ’को टिजर सार्वजनिक
‘हल अफ फेम सिजन २’ को चौथो एपिसोडमा ११ जनाको अडिसन
म आफूलाई सुन्दर छैन भन्ठान्थेँः काजोल
आउँदो दसैंमा ‘परदेशी २’
राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानको २० औं साधारण सभा सम्पन्न
यस्तो छ कट्रिना कैफको लाइफस्टाइल
कट्रिना कैफको जन्म सन् १९८३ मा हङकङमा भएको थियो । उनको पिता एक ब्रिटिश बिजनेश म्यान हुन् । उनकी आमा सुजैन पेशाले एक वकिल हुन् ।
मलाइकासँग डिनर डेटमा अर्जुन, क्यामेराबाट बच्न माउथ माक्स !
एजेन्सी । पछिल्लो समय मलाइका आरोडा र अभिनेता अर्जुन कपुरको अफेयरको चर्चा चलिरहेको छ । समाचारमा आए अनुसार यो जोडी चाँडै वैवाहिक बन्धनमा बाँधिनेवालामा छन् ।
‘मिस वर्ल्ड २०१८’ का लागि सान्या पुगेकी श्रृङखलाले आफ्नो प्रतिस्पर्धीलाई ‘नमस्ते नेपाल’ सिकाउँदै !
काठमाडौं । चीनको सान्यामा ‘मिस वर्ल्ड २०१८’ को लागि १ सय २१ देशका युवती जम्मा भएका छन् । मिस नेपाल शृंखला खतिवडाले नेपालको प्रतिनिधित्व गरिरहेकी छन् ।
एकाएक बलिउडमा फिट हुन छोडिन् विद्या बालन
एजेन्सी । पा, इश्किया, नो वन किल्ड जेसिका, द डर्टी पिक्चर र कहानी फिल्महरुबाट सफलताको शिखर चढेकी विद्याका फिल्महरुले पछिल्लो पटक खासै बक्स अफिसमा कमाल देखाउन सकेका छैनन् । शाहरुखले कुनै समय त विद्यालाई चौथो खान समेत बताएका थिए तर अब त्यो अवस्था भने रहेन ।
यस्तो छ नाना पाटेकरको लाइफस्टाइल
एजेन्सी । बलिउडका एक प्रशिद्ध कलाकार हुन् नाना पाटेकर । उनको वास्तविक नाम विश्वनाथ पाटेकर हो । उनको जन्म सन् १९५१ मा भएको थियो । बलिउडमा बेजोड अभिनय कला
कुन बलिउड सेलिब्रिटीको उचाइ कति ?
बलिउडमा हाइटका कारण चर्चामा आउने अभिनेत्री पनि रहेका छन् । हाइटका कारण कतिपय हिरोसँग फिल्म खेल्न पनि समस्या पर्ने गरेको छ ।
यस्तो बन्यो ‘डोली’ को अफिसियल ट्रेलर
काठमाडौं । फिल्म ‘डोली’ को अफिसियल ट्रेलर सार्वजनिक भएको । फिल्मको सार्वजनिक ट्रेलरमा लभ, एक्सन र कमेडीलाई प्रस्तुत गरिएको छ । यो फिल्म मंसिर २८ गतेबाट दर्शकमाझ प्रदर्शनमा आउँदैछ ।
मिस वर्ल्डको मल्टिमिडिया भोटिङमा शृंखलाको अग्रता कायमै
काठमाडौं। यतिबेला चीनको सान्या सहरमा मिस वल्र्ड २०१८ को लागि १ सय २१ देशका सुन्दरी भिडन्तमा छन् ।
भरतपुरमा ज्याेति मगरमाथि भयाे दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार गर्ने युवक सहमतिमा रिहा
भरतपुर । भरतपुरमा गायिका ज्योति मगरमाथि दुर्व्यवहार भएको छ ।